Kanye nemishini yokuthunga, ehamba phambili futhi enokunikezwa okungenakuvinjwa
Kanye nemishini yokuthunga
Umhlaba wokuthunga uheha abantu abaningi. Ukuthi ukwazi ukwenza izinguquko ezithile ezingutsheni noma, ukuze ucacise imiklamo yakho kuhlale kuyinto eqinisekisayo. Ngakho-ke, kukhona abaningi abathi nsuku zonke banqume ukuthenga zabo umshini wokuthunga wokuqala. Abanye badinga ukuqhubekela phambili futhi kulokhu, bazodinga nomshini ovumelana nezidingo zabo.
Uma ufuna ukuthola ukuthi iyiphi inketho yakho engcono kakhulu, ungaphuthelwa yikho konke esikutshela kona namuhla. Kusukela emishinini yokuthunga eshibhile futhi elula yabaqalayo, ukukhiya noma ochwepheshe kakhulu nezimboni. Yikuphi kuzo ozokhetha ukukukhetha?
imishini yokuthunga ukuqala
Uma ufuna eyodwa umshini wokuthunga ukuze uqale, ngezansi uzothola amamodeli amane alungele abaqalayo noma imisebenzi elula:
I-Modelo Izici Intengo
-Izinhlobo zokuthunga: 12
-Ubude nobubanzi bomthungo: Kuyalungiseka
-4-isinyathelo esizenzakalelayo inkinobho
-Ezinye izici: i-compact design, i-reinforcement seams, i-zig-zag 133,24 €
Bona ukunikezwaQaphela: 9 / 10
Umculi 2263 Tradition
-Izinhlobo zokuthunga: 16
-Ubude nobubanzi bomthungo: Kuyalungiseka kufikela ku-4 no-5 mm ngokulandelana
-Automatic buttonhole 4 izinyathelo
-Ezinye izici: Ukuthunga okuqondile nokumazombezombe, izesekeli, unyawo lokucindezela 137,75 €
Isitayela se-Alpha 40
-Izinhlobo zokuthunga: 31
-Ubude nobubanzi bomthungo: Kuyalungiseka kufika ku-5 mm
-Ezinye izici: I-LED, unyawo olulungisekayo, isibambi se-spool yensimbi 189,99 €
Bona ukunikezwaQaphela: 10 / 10
-Izinhlobo zokuthunga: 40
-5 izinkinobho ezizenzakalelayo, 1 isinyathelo
-Ezinye izici: Imisebenzi ye-patchwork kanye ne-quilting 171,31 €
Nakuba ingekho etafuleni elingenhla, futhi awukwazi ukuyiyeka Umshini wokuthunga we-Lidl, imodeli enhle ongaqala ngayo kodwa ukutholakala kwayo kukhawulelwe esitokweni sesuphamakethe.
Uzobe ulungile nanoma yimaphi amamodeli asetafuleni, kodwa uma ufuna ukwazi okwengeziwe mayelana ngamunye wabo, ngezansi sizokutshela izici eziyinhloko ngayinye yale mishini yokuthunga eye yaba inketho ephelele kulabo abafuna ukuqala emhlabeni wokuthunga noma kulabo abafuna inketho yekhwalithi yentengo enhle:
Umshini Wokuthembisa Umculi...
Uma ufuna umshini wokuthunga oyisisekelo onezici ezibalulekile zokuthi uqalise, i Umshini wokuthunga umculi I-Promise 1412 izoba ngeyakho. Uma uhlela ukwenza i- imisebenzi elula efana ne-hemming noma ukuzipha, kanye nezinkinobho, kuzoba kuhle kuwe. Ngaphezu kwalokho, ingumshini wekhwalithi ngentengo enhle. Kulula ukuyisebenzisa futhi njengoba sisho, ilungile uma usaqala. Nakuba inezitishi ezihlukene ezingu-12, kufanele wengeze amafestoni okuhlobisa.
Intengo yayo imvamisa iseduze I-115 euro futhi sikwazi yiba ngowakho lapha.
Umculi 2250 Tradition
Umculi 2250 Tradition -...
Ngenye ye imishini yokuthunga ethengiswa kakhulu, ngakho-ke, sesivele sinedatha enhle ngaphambili. Inemisebenzi eminingi futhi ebalulekile lapho uqala emhlabeni wokuthunga. Futhi, hhayi lokho kuphela, njengoba ngengqikithi yezitishi eziyi-10, izophinde iphelele uma usuvele unezisekelo. Ngakho, ngeke ube mfushane. Ingenye elula kakhulu, ngakho ungakwazi ukuyihambisa ngokwezidingo zakho.
Intengo yalo mshini wokuthunga ukuqala imayelana I-138 euro y ungayithenga lapha
Umshini Wokuthunga we-ALFA, ...
Omunye wemishini ebalulekile i-Alfa Style 40. Ngaphezu kwanoma yini ngoba ilula kakhulu, kubo bonke labo abangenawo umqondo wokuthunga. Yini enye, imisebenzi yayo iphelele njenge-threader ezenzakalelayo, i-buttonhole ngezinyathelo ezi-4. Iphinde ibe nesibani se-LED, kanye ne-blade yokusika intambo. Khumbula ukuthi kukhona imithungo engu-12 kanye nama-scallops amabili okuhlobisa. Okuzoba yisisekelo semisebenzi ejwayelekile kakhulu.
Kulokhu, intengo ikhuphukela cishe kuma-euro ayi-180. Thenga lapha.
Mfowethu CS10 Machine...
Uma ufuna ukuzikhuthaza ngeyokuqala umshini wokuthunga we-elekthronikhi, lena kuzoba imodeli yakho engcono kakhulu. Hhayi ngoba i-elekthronikhi kunzima ukuyisebenzisa, okuphambene kakhulu. Ngaphezu kokuthunga okuyisisekelo, ungaqala futhi izinyathelo zakho zokuqala emhlabeni we i-patchwork kanye ne-quilting. Kulula ukuyisebenzisa njengokukhetha umsebenzi esizowenza, ubude nobubanzi bomthungo ngamunye futhi yikho.
Okuhle ukuthi uma wazi ukuthi ungasebenzisa kanjani okulula kakhulu, kukuvumela ukuthi uqhubeke kancane, ngenxa yokuthi uphelele kangakanani. Konke lokhu ngentengo cishe I-165 euro. Uma uthanda, ungakwazi thenga lapha.
Uma ufuna ukubona amamodeli amaningi we imishini yokuthunga umfowethu, faka isixhumanisi esisanda kukushiya.
imishini yokuthunga eshibhile
Uma okufunayo kuyinketho eshibhe kunazo zonke, usunayo imishini yokuthunga eshibhile nakuba siphinde sakhetha amamodeli anenani elikhulu lemali:
-Izinhlobo zokuthunga: 13
-Ubude nobubanzi bomthungo: Ayilungiseki
- 4 i-stroke grommet
-Ezinye izici: Inalithi kabili 115,36 €
-Izinhlobo zokuthunga: 17
-Ubude nobubanzi bomthungo: izilinganiso ezi-2
-Ezinye izici: Ukuphenduka okuzenzakalelayo, ukukhanya, ingalo yamahhala Ayikho imikhiqizo etholakele.
Umculi Olula 3221
-Izinhlobo zokuthunga: 21
-I-buttonhole ezenzakalelayo isikhathi esingu-1
-Ezinye izici: ukukhanya, ingalo yamahhala, i-threader ezenzakalelayo 179,99 €
Bona ukunikezwaQaphela: 9/10
I-Alpha Elandelayo 40
-Izinhlobo zokuthunga: 25
-Automatic buttonhole 1 isinyathelo
-Ezinye izici: Ukungazweli, ukuthunga kalula 232,99 €
Umshini we-Jata MC695...
Sibhekene nenye yemishini yokuthunga eshibhe kakhulu. I-Jata MC695 inenani lezinhlobo eziyi-13 zokuthunga. Kakhulu umshini kulula kakhulu ukuwusebenzisa futhi ulula uma kuziwa ekuthuthweni. Inezinsiza eziningi, kanye nokukhanya okuhlanganisiwe. Iphelele kulabo abaqalayo kodwa nalabo asebevele bafuna okuthile okwengeziwe. Mhlawumbe iphuzu elibi liwukuthi ubude nobubanzi bomthungo abulungiseki.
Intengo yayo ayinakuvinjwa futhi ingaba ngeyakho I-113 euro. uyamfuna Thenga lapha
Umshini Wokuthunga Umculi...
Kungenye yezindlela ezingcono kakhulu. Imibono iyavuma ukuthi umshini wokuthunga ukuqala ngawo, kodwa futhi nakubantu abadinga okuthile okwengeziwe esikhathini esifushane. Ngakho-ke, uma ungatshala imali eyengeziwe, lena imodeli yakho. Inemithungo engu-21 enokulawula ubude nobubanzi. Yini enye, izonikeza imithungo engama-750 ngomzuzu, ingalo yamahhala nokukhanya okuhlanganisiwe.
Kulokhu, sibheja ngenani elikhulu lemali futhi lokho kungukuthi nakuba ishibhile njengamamodeli amabili angaphambilini, iSinger Simple iyimodeli emnandi yokungena engaba eyakho ngama-euro ayi-158 futhi ungakwazi. thenga lapha.
I-ALFA Next 40+ Spring ...
Omunye wemishini yokuthunga enezimfanelo ezithuthukile yilena. Inguqulo entsha ye Imishini yokuthunga i-Alpha Olandelayo. Kunamamodeli amaningi kulolu hlu anezici ezifanayo. Kodwa kulokhu, sisele ne-Alfa Next 45. Ilungele labo abasanda kuqala noma labo abafuna umshini wabo wokuqala wokuthunga uhlale isikhathi eside. Ngemithungo engama-25 kanye nama-scallops okuhlobisa ama-4Bazohlangabezana nokulindela kwakho.
I-Alfa Next 45 iyimodeli enani layo cishe i-225 euros futhi yini ongayenza thenga lapha. Ukutholakala kwabo kukhawulelwe ngakho uma bengenaso isitoko uma usithenga, ungathenga noma imaphi amamodeli abo ku-Next family njengoba afana kakhulu ngokwezici.
IToyota SPB15 - Umshini...
Enye yezinketho ezishibhile yilena. I umshini wokuthunga we-toyota Idatha ye-SPB15 Ingenye yezinketho ezinhle kakhulu. Ihlangene, ilula futhi inezinhlobo ezingu-15 zokuthunga. Phakathi kwazo, sigqamisa izinhlobo ezi-4 zokuhlobisa, i-hem stitch kanye ne-zig-zag. Futhi ine-recoil lever ewusizo kakhulu.
Intengo yomshini wokuthunga weToyota SPB15 ingama-euro ayi-112 kuphela futhi ungakwazi thenga lapha.
imishini yokuthunga professional
Uma okudingayo kuyi- umshini wokuthunga ochwepheshe, ngezansi sikunikeza amanye amamodeli aphelele kakhulu alabo abafuna izinzuzo kanye nemisebenzi yekhwalithi engcono:
U-Bernett Sew&Go 8
-Izinhlobo zokuthunga: 197
-7 eyelets 1 isinyathelo
-Ezinye izici: Quilting, Patchwork, 15 izinaliti izikhundla 349,99 €
Umculi uCurvy 8770
-Izinhlobo zokuthunga: 225
-6 eyelets 1 count
-Ezinye Izici: Alphabet Amaphethini, Smart Threading Intengo ayitholakali
Bona ukunikezwaQaphela: 8 / 10
Umculi u-Starlet 6699
-Izinhlobo zokuthunga: 100
-6 eyelets 1 isinyathelo
-Ezinye izici: 12 izikhundla inaliti, isakhiwo metal 279,99 €
Umculi we-Quantum Stylist 9960
-Izinhlobo zokuthunga: 600
-13 eyelets 1 isinyathelo
-Ezinye izici: 2 izibani LED, 26 inaliti izikhundla 749,00 €
-Izinhlobo zokuthunga: 60
- ama-eyelets angu-7
Ezinye izici: Isibonisi se-LCD, unyawo lokucindezela oluphindwe kabili 649,00 €
Uma sikhuluma ngemishini yokuthunga echwepheshile, kuyacaca ukuthi sesivele sikhuluma ngamatemu amakhulu. Izici ezengeziwe ze qeda imisebenzi nje ngochwepheshe. Kulokhu, uBernett Sew&Go 8 usishiya nesamba semithungo engu-197. Kuzo, angu-58 awokuhlobisa. Uzothola isamba sezinaliti eziyi-15 nokuphakama okuphindwe kabili konyawo lokucindezela. Iyakwazi ukumelana kakhulu futhi inengalo ekhululekile.
Intengo yalo mshini wokuthunga ochwepheshe I-399 euro futhi ungakwazi thenga lapha.
Umculi uCurvy 8770 -...
Ngaphandle kokungabaza, sibhekene nenye yezinketho ezinhle kakhulu. Ngaphambi komkhiqizo sonke esiwaziyo futhi ohlale usibonisa izinketho ezingcono kakhulu. Esimweni esinjalo, ahlanganiswe nesamba semithungo engama-225. Yebo sibonga lokho ungavumela umcabango wakho undize. Ngaphezu kwalokho, inamaphethini, anobude obuguquguqukayo bomthungo nobubanzi kanye nesistimu yokujika ezenzakalelayo. Inalithi ephindwe kabili kanye nezinhlobo eziyisikhombisa zezinkinobho… yini enye esingayicela?
Uma unentshisekelo, ungathenga iSinger Curvy lapha
Sesivele siqale ngezitishi eziyi-100 sezizonke. Ngakho-ke, singakwazi kakade ukuthola umbono wokuthi ngomunye umshini ozosivumela ukuthi sithuthuke noma nini lapho sifuna. Ubude nobubanzi bazo buyalungiseka. Ngaphezu kwalokho, kufanele kukhulunywe ukuthi inakho Izinaliti eziyi-12 kanye nengalo yamahhala nokukhanya kwe-LED. Ngisho nezindwangu eziwugqinsi ngeke zimelane nakho.
Nakuba kuwumshini wokuthunga ochwepheshe, iSinger Starlet 6699 ingaba eyakho kuphela I-295 euro. Ingabe uyayifuna? yithenge lapha
Umculi we-Quantum Stylist...
Vele, uma sikhuluma ngemishini yokuthunga echwepheshile, asikwazanga ukukhohlwa iSinger Quantum Stylist 9960. Ngaphandle kokungabaza, ingenye yalezo zonke onazo engqondweni zizosebenza. Inezinhlobo ezingu-600 zokuthunga, kokubili ubude nobubanzi bayo kungalungiswa. Singasho ukuthi kunjalo enye yezinamandla kakhulu emakethe.
Intengo yayo ngu I-699 euro kodwa ngokubuyisela sizothola omunye wemishini yokuthunga engcono kakhulu emakethe futhi ongayithenga kusuka lapha.
I-Alfa Model 2160-Umshini...
Sisele nemodeli yomshini we-Alfa enezici eziphelele, enesikrini se-LCD okulula kakhulu ukusisebenzisa. Kuzoba njalo ilungele izindwangu eziwugqinsi, ukuze ukwazi ukwenza imisebenzi ehlukene ngomphumela omuhle. I-threader ezenzakalelayo, kanye nezitishi ezingu-60 nezinhlobo eziyisikhombisa zama-buttonholes.
Intengo yalo mshini wokuthunga ochwepheshe ingama-euro angu-518 futhi ungakwazi thenga lapha.
Indlela yokukhetha umshini wami wokuqala wokuthunga
Ukukhetha umshini wami wokuqala wokuthunga kungase kungabi umsebenzi olula. Sonke sicabanga ngomshini omuhle, ongazweli owenza umsebenzi ngokuqedwa okuhle. Kodwa ngaphezu kwalokhu, kuneminye imininingwane okufanele icatshangelwe.
Nakuba kungaba ngomunye wemibuzo ephindaphindwayo, ibalulekile. Uma uzoyisebenzisela imisebenzi eyisisekelo kuphela, akufanele usebenzise imali eningi emshinini wochwepheshe. Ngaphezu kwanoma yini ngoba ngeke usebenzise ingxenye yemisebenzi yayo. Manje, uma uthanda umhlaba wokuthunga, ungathengi umshini oyisisekelo kakhulu. Into engcono kakhulu ukuthi iphakathi, ukuthi inemisebenzi eminingana futhi isivumela ukuthi siqhubekele phambili kancane. Ngaphandle kwalokho, ngesikhashana nje izobe isiphelelwe yisikhathi ngokwezidingo zethu.
Futhi ungakhathazeki uma ungazi ukuthi ungayisingatha kanjani ekuqaleni, lapha ungakwazi funda ukuthunga kalula nangokucacile.
Yiziphi izici okufanele umshini wami wokuthunga wokuqala ube nazo?
izinhlobo zokuthunga: Esinye sezici okufanele sicatshangelwe imithungo. Ngemisebenzi eyisisekelo kakhulu, umshini onokumbalwa uzoba uphelele. Uma kungenjalo, khetha lawo anemithungo eminingi. Ubude bomthungo bubalulekile uma usebenza ngezindwangu eziwugqinsi. Ngakho-ke, sizodinga ukuthungwa okude. Ububanzi bemithungo bubalulekile futhi uma uzokwenza umsebenzi onjenge beka amabhande okunwebeka noma ukusibekela.
i-eyelet: Kukhona umehluko omncane phakathi kwawo. Yiqiniso, ukwenza i-buttonhole ngezinyathelo ezine akufani nokwenza eyodwa. Okuthile okufanele sikukhumbule kusukela ngale mininingwane singenza ama-buttonholes ahlukahlukene engutsheni.
izikhundla yenaliti: Uma umshini wokuthunga unezikhundla eziningi, sizoba nezinketho eziningi lapho sikhetha izinhlobo ezahlukene zokuthunga.
uphawu lomshini: Ngokuvamile, kuhlale kungcono ukubeka ithemba lakho kumikhiqizo eyaziwa kangcono. Ngaphezu kwakho konke ngoba siyazi ukuthi sikhokhela izimfanelo ezinhle. Ngaphezu kwalokho, sizoba nesevisi yezobuchwepheshe eduze nezingxenye ezahlukene esizidingayo.
Potencia: Sicela uqaphele ukuthi imishini enamandla angaphansi kuka-75W ayifanele ukuthunga izindwangu eziwugqinsi.
Khumbula ukuthi umshini wokuthunga unezinzuzo eziningi. Enye yezinto eziyinhloko ukukwazi ukonga ama-euro ambalwa ezimpahleni. Impela uphelelwa yithemba uma izingane zilahlekelwa yizimpahla ebezintsha noma uya esitolo ungatholi lutho oluhlangabezana nezidingo zakho. Manje usungakwazi ukushintsha konke lokhu, ngokubekezela okuncane nokuzinikela. Impela:
Kulezi zimo, ungazivumeli ukuthi umangazwe yi- imishini yokuthunga endala njengoba ziyinkimbinkimbi kakhulu ukuphatha futhi namuhla zisetshenziswa kakhulu njengento yokuhlobisa kunanoma yini enye. Uma isabelomali siyinkinga kuwe, ungahlala uphendukela ekuthengeni imishini yokuthunga ngesandla sesibili.
Umshini wokuthunga wasekhaya vs umshini wokuthunga wezimboni
Ingabe uyazi main umehluko phakathi komshini wokuthunga wasekhaya kanye nomshini wokuthunga wezimboniyena? Ngaphandle kokungabaza, kungenye yemininingwane okufanele uyazi ngaphambi kokuqalisa ukuthenga okukodwa kwalokhu okubili. Lapha futhi kunezici ezimbalwa okufanele uzazi.
umshini wokuthunga wasekhaya
Njengoba igama layo likhombisa, umshini wokuthunga wasekhaya yiwo onemisebenzi eyisisekelo yemisebenzi evamile. Phakathi kwazo sigqamisa imisebenzi yokuthunga esiyaziyo sonke. Hlobisa ezinye izingubo, thunga izinyembezi, imithungo noma oziphu.
Umshini wokuthunga wezimboni
Zenzelwe imisebenzi enzima kakhulu. Baqinisekisa abanye umsebenzi wobungcweti owengeziwe kanye nemithungo engazweli kakhulu. I-Upholstery noma izintambo ziphelele kulolu hlobo lomshini. Into angayicabangeki kwabahamba nabo. Ngaphezu kwakho konke lokhu, kufanele kushiwo ukuthi uma sifuna umshini walolu hlobo, kungenxa yokuthi sinomsebenzi omkhulu nsuku zonke futhi ngenxa yokuthi vele singaphezu kokuhlangenwe nakho emhlabeni wokuthunga. Bahloselwe ukusebenza ngenqwaba yezindwangu hhayi nje kuphela ukuba efektri, kodwa futhi babe sekhaya.
Zisinikeza isivinini esiphakathi kuka-1000 no-1500 wezitishi ngomzuzu, vele futhi inohlangothi olubi. Izodla amandla amaningi kunomshini ojwayelekile futhi ingenza umsindo omkhulu kuneminye.
Ungathenga kuphi umshini wokuthunga
aNamuhla sinezindawo ezimbalwa lapho singathenga khona umshini wokuthunga. Ngakolunye uhlangothi, sine- izitolo ezinkulu, izitolo ezinkulu kanye nezitolo lapho ungathola khona neminye imikhiqizo yekhaya. Yiqiniso, ngaphezu kwalokho, unamaphuzu asemthethweni amele uhlobo ngalunye lwemishini.
Kodwa uma ungafuni ukuchitha amahora usuka endaweni eyodwa uye kwenye, ukuthengisa ku-inthanethi kungenye yezinketho ezikhetheke kakhulu. Amakhasi afana ne-Amazon Banazo zonke izinhlobo zamamodeli., kanye nezici zayo ezinemininingwane eminingi nezintengo ezincintisana kakhulu. Eqinisweni, ungagcina ngisho nama-euro ambalwa uma kuqhathaniswa nezitolo ezibonakalayo.
izesekeli zomshini wokuthunga
Yonke imishini yokuthunga iza nezinto eziningi. Yiqiniso, lokhu kungase kuncike ohlotsheni lwemodeli. Noma kunjalo, izingxenye ezisele zizohlala ziyisisekelo sokuthenga kwethu. Uma kuziwa ekuthengeni, inqobo nje uma ubheka imininingwane yomshini wakho. Lapho bazokutshela ukuthi yiluphi uhlobo oluthile oludingayo noma, uma lusekela ezijwayelekile.
Okulandelayo sizobona izesekeli zomshini wokuthunga okuvame kakhulu:
Nakuba sicabanga ukuthi izosisiza ngemicu esinayo, akwanele. Ngezinye izikhathi, sidinga imibala eyengeziwe, ukuze uthole izinketho eziningi zangempela ezifika engqondweni. Khumbula ukuthi kubalulekile ukuba nakho intambo ye-polyester kanye ne-embroidery. Esitolo lapho uthenga khona umshini, bazophinde babe nawo onawo.
Nakuba imishini eminingi isivele inabo, kufanelekile ukuyicabangela. Ngenxa yabo, ungenza izinhlobo ezahlukene ze-seams. Ngeke ube ngaphandle kwabo!
Uma izinyawo zokucindezela noma izintambo ziyisisekelo, kuthiwani ngezinaliti? Abanye beza nomshini wethu, kodwa khumbula ukuthi abanye bangalahleka endleleni. Ngakho hlala useduze izinaliti eziningana. Kungcono ukukhetha izinaliti zezindwangu eziningana ezahlukene Futhi ikhwalithi enhle.
Kanye nama-bobbins, kungcono ukubheka icala. Ngaleyo ndlela ngeke uphuthelwe. Kungcono ukuba no-12 noma 15. Gcina lokho engqondweni!
Uma ubona ukuthi awufuni ukuba nalezi zinsiza ngazinye, ungakwazi njalo ukuthenga lokho okubizwa ngokuthi iphakethe. Kuyo, uzothola okubaluleke kakhulu ngaphezu kwalokho ezinye isikelo kumamodeli ahlukene ukuze alingane nemisebenzi yethu. Awukwazi futhi ukuphuthelwa abasiki kanye namateyipu ukuze ulinganise.
Amazwana angu-23 kokuthi «»
Julayi 31, 2018 at 6:34 pm
Ngimangele phakathi kobhuti cs10, ubhuti fs40, umculi 6699, alfa cooakt 500
Julayi 31, 2018 at 6:35 pm
Ikuphi okungaba okuphelele kakhulu?
Agasti 1, 2018 ngo-9: 35 am
Ngenani lemali, umculi u-Scarlet 6699 nguye owinile. Uma ufuna okuphelele kakhulu, khona-ke iCompakt 500E Plus kodwa intengo yayo iphezulu kakhulu.
Januwari 2, 2019 ku-1: 43 pm
Sawubona unyaka omusha omuhle!!
Ngicela ningisize nginengane yentombazane eneminyaka ewu 8 ethanda imfashini nokudizayina izingubo kusukela isencane yinto ephuma ekuzaleni kuyintando yakhe ezinsukwini ezedlule ngibonile umshini wokuthunga we-lidl cishe ngama-euro angama-78 ngaphezulu noma i-mens angikhumbuli kahle, into ukuthi bekungowokugcina futhi angizange ngiqiniseke ukuwuthenga ngenxa yemininingwane emincane.
Akukhona ukuthi ngifuna ukuchitha imali eningi, kodwa-ke, angifuni ukuthenga into kamuva eyenza kube nzima kimi ukuthola izesekeli, njll, ngoba sihlala e-Canary Islands futhi konke kuhamba kancane kancane. Ngazi umculi impilo yami yonke, bekuhlezi kukhona endlini yami, futhi ngingathanda ukuba neyodwa enhle ngokwekhwalithi namanani futhi ngilahlekile noma ngabe iSinger noma enye oyincomayo. Sifuna ukuyisebenzisela ukufunda nokusigcina isikhashana njengoba sithuthuka, ungangisiza futhi uncome okunye ngicela.
Januwari 2, 2019 ku-2: 56 pm
Kusukela kulokho ongitshela khona, imodeli engiyincoma kakhulu iSinger Promise, umshini wokuthunga olula kodwa onokwethenjelwa okulula ukuwusebenzisa futhi ozovumela indodakazi yakho ukuba ithuthukise amakhono ayo emhlabeni wokuthunga.
Njengoba uthola ulwazi, uzokwazi ukugxumela kumamodeli aphelele, kodwa okokuqala, lena inketho enconywe kakhulu ngaphandle kokungabaza, futhi iyathengiswa manje.
Februwari 22, 2019 ngo-3: 41 pm
Sanibonani kade nginawo umshini wokuthunga kodwa manje ngifuna ukuthunga ezinye izinto kanti lena enginayo ayingiphenduli ngibone abaningi kwi internet kodwa angikwazi ukuthatha isinqumo ngidinga usizo lwenu ngiyangabaza ngoMfowethu cx 7o, noma umculi u-STARLEYT 6699. .ngiyabonga kakhulu
Imuphi kulokhu okubili othunga kangcono umthungo?
Mashi 1, 2019 ku-10: 04 am
Kumamodeli owaphakamisayo, womabili izinketho ezinhle, cishe ezichwepheshile. Umshini weSinger uphelele kakhulu njengoba unezitishi eziningi (100 vs. 70).
Ngokuqondene ne-Brother CX70PE, iyimodeli egxile kakhulu ku-Patchwork futhi ibiza cishe ngama-euro angama-50 kune-Singer, ngakho-ke uma uhlangabezana nezidingo zakho ngale modeli, kungenye indlela enhle kakhulu.
Ephreli 9, 2019 ku-9: 10 am
Ngicela umshini wokuthunga ophathwayo osheshayo kwazise ngijwayele ukuthunga no-alfa omdala kamama kanye no-refrey kanti lezi engizibone kozakwethu zihamba kancane.
Ngiyidinga ekuthungeni okujwayelekile kodwa futhi eqinile ekwazi ukuthunga izinto eziwugqinsi njenge-leatherette. Isabelomali sami silinganiselwa ku-€200-400. Kunemikhiqizo eminingi nemibono eminingi angazi ukuthi ngiqale kuphi. Phakathi kwazo ongeluleka ngazo kubhekwa ukuthi ngibheke ijubane, ukuqina, nokuguquguquka.
Ephreli 9, 2019 ku-10: 47 am
Kusuka kulokho ositshela khona, imodeli engakwazi ukujwayelana nalokho okufunayo iSinger Heavy Duty 4432. Iwumshini oqinile (umzimba wawo uyinsimbi enepuleti lensimbi), uyashesha (imithungo engu-1100 ngomzuzu) futhi wenza izinto ezihlukahlukene. (ungathunga zonke izinhlobo zezindwangu futhi inezinhlobo ezingu-32 zokuthunga).
Okuhle kakhulu ukuthi ingena kahle kubhajethi yakho.
Ephreli 16, 2019 ku-9: 55 am
Sawubona, nginentshisekelo yokuthenga umshini wokuthunga omusha, njengoba lo enginawo, anginawo amandla okudonsa nokuphakama okuphindwe kabili konyawo lokucindezela. Ngaphezu kwakho konke ngithunga itheyiphu yenayiloni ehlanganiswe nendwangu kakotini, kukhona indawo lapho kufanele ngithunge izingcezu ezi-2 zenayiloni ewugqinsi nokotini. Ngomshini enginomculi manje, ongisebenzela kahle kakhulu, kodwa anginawo amandla okudonsa. Imuphi umshini owutusayo?
Ephreli 22, 2019 ku-11: 20 am
Unamandla kangakanani umshini wakho wamanje? Bheka I-Singer Heavy Duty ukuze ubone ukuthi iyazifanela yini izidingo zakho.
Ephreli 25, 2019 ngo-1: 44 pm
sanibonani ngineserenade yomculi engamthenga amasekeni manje njengoba sengivele nginesandla kulomhlaba bengifuna okunye ikakhulukazi izindwangu eziqinile nokwenza izinto eziningi ningicebisa ngani bengibuka ama alpha engikuthandile ngokuklama iqiniso , kodwa ngingathanda ukwazi iseluleko sakho.
Ephreli 26, 2019 ku-11: 00 am
Ngaphandle kokwazi ukuthi ibhajethi yakho iyini, kunzima ukukuncoma njengoba uhla lwezinketho lubanzi kakhulu futhi cishe noma iyiphi imodeli ye-€150 isivele ingaphezu komshini wakho wamanje. Kodwa ngizodinga ukwazi uma ufuna ukusebenzisa u-€150, €200 noma u-€400 ukuze ngikunikeze ukukhethwa kwamamodeli omshini wokuthunga angcono kakhulu asekelwe ezidingweni zakho.
Ngolwazi osinikeze lona, ​​okuwukuphela kwento engingayicabanga ukutusa I-Singer Heavy Duty ukuthunga lezo zindwangu eziqine kakhulu.
UPatricio Bustillos Vasco
Meyi 2, 2019 ngo-1: 04 pm
Ngifuna ukunikeza intombi yami umshini wokuthunga ngosuku lwayo lokuzalwa. Useneminyaka elandela izifundo zokuthunga, ukuklama imfashini nezinye, kodwa angazi ngalo mhlaba wemishini yokuthunga. Uyidinga ukuze enze izingubo zakhe futhi ahumushe imibono yakhe nemidwebo ibe yinto ephathekayo. Ngingathanda futhi kube yinto engokwemvelo, engamele kakhulu ekusetshenzisweni kukagesi. Imuphi umshini owutusayo?
Ngiyabonga kakhulu ngosizo lwakho!
Meyi 3, 2019 ku-10: 04 am
Ngaphandle kokwazi ibhajethi yakho, kunzima kakhulu ngathi ukuncoma umshini wokuthunga.
Ezingeni lemvelo, bonke beza ukuzochitha inani elifanayo lokukhanya ezimweni eziningi. Kunoma yikuphi, kuyinani eliphansi kakhulu elibiza kakhulu okumele liqashelwe kumthethosivivinywa kagesi (asikhulumi nge-air conditioner noma i-oven, edla okuningi).
Uma usinika imajini yalokho ofuna ukukusebenzisa, singakusiza kangcono kancane.
Meyi 15, 2019 ngo-5: 14 pm
Ngiyabonga kakhulu ngempendulo yakho. Ngikhohlwe ngokuphelele ukubhala isabelomali, sihamba phakathi kwe-150 kuya ku-300 euros.
Meyi 16, 2019 ku-9: 55 am
Ngibhalela wena mayelana nombuzo wakho mayelana nokuthi yimuphi umshini wokuthunga ongawuthenga.
Njengoba uyifuna njengesipho somuntu osenolwazi lwemfashini nokuthunga, kungcono ukubheja kumodeli enikeza izinhlobonhlobo eziningi zokuthunga. Ngalokho, i-Alfa Pratick 9 ingelinye lamakhandidethi angcono kakhulu onawo okunikezwayo. Futhi unesabelomali esiningi uma kwenzeka ufuna ukunikeza incwadi yokuthunga, izesekeli noma ikhava.
Uma welula isabelomali sakho kancane kancane, unomshini wokuthunga we-elekthronikhi we-Compakt 500E ohlinzeka ngemiklamo eminingi yokuthunga futhi ukunye iligi uma kuziwa ekusebenzeni nawo.
Juni 18, 2019 ngesikhathi 11:07 am
Sawubona, nginentshisekelo yokuthenga umshini wokuthunga ohlobisa amalogo noma izinhlamvu. Ungangitshela ukuthi iyiphi imodeli eyenzayo? Ngikufisela okuhle
Juni 18, 2019 ngesikhathi 11:17 am
Ngikubhalela ngomlayezo osishiyele wona kuwebhusayithi yethu yomshini wokuthunga.
Kusukela kulokho okushilo, into enconywa kakhulu ukuthi uthatha umshini wokuthunga we-Patchwork, yibo abanikeza izinketho eziningi uma kuziwa ekufakeni ama-alfabhethi nemifanekiso ehlukene.
Isibonelo, i-Alfa Zart 01 iyikhandidethi elihle futhi elingekho emgwaqeni. Ungenza konke ngayo.
Septhemba 27, 2019 ngo-11: 49 am
Sawubona, ngicela unginikeze umbono wakho ngemishini emithathu enginayo imibono I-Practical Alpha 9 Elna 240 kanye ne-Janome 3622 noma owodwa ocabanga ukuthi uzongisebenzela kahle, ngiyabonga, ngilindele impendulo yakho
Novemba 10, 2019 ngo-10: 24 pm
Ngiyayithanda ibhulogi yakho, ingisiza kakhulu. Ngiyaqala ukufundela ukusika, ukuthunga nokwenza amaphethini ngoba ngingathanda ukuzinikela kukho. Ngifuna ukutshala imali emshinini omuhle ongigcinayo futhi owusizo ezigqokweni ngaphezu kwakho konke. Angifuni ukukweqa kukho, okungukuthi, hhayi okuyisisekelo kakhulu (hhayi okubiza kakhulu engingeke ngikudinge) iyiphi oyincomayo?
Novemba 11, 2019 ku-8: 41 am
Ngokwami, sincoma i-Alfa Pratik 9. Kungumshini wokuthunga we-terrain-terrain osebenza kahle kubo bobabili abasebenzisi abangenalwazi nalabo asebevele benolwazi oludingekayo ukuze benze konke okusemandleni abo.
Septhemba 2, 2020 at 2: 59 pm
Sanibonani nginengoma engu 4830c kodwa ayisasebenzi kahle, yimuphi ongaba ngowebhrendi efanayo noma onezimpawu ezithi azifane noma ezidlula kancane okwamanje ngiyabonga
Ngiyakwamukela imigomo yobumfihlo *
Inhloso yedatha: Ukulawulwa kwe-SPAM, ukuphathwa kwamazwana.
Ukugunyazwa: Imvume yakho
Ukuxhumana kwedatha: Idatha ngeke idluliselwe kwabanye abantu ngaphandle kwesibopho somthetho.
Ukugcinwa kwedatha: Isizindalwazi esiphethwe yi-Occentus Networks (EU)
Amalungelo: Ungakhawulela, ubuyisele futhi ususe imininingwane yakho noma kunini.
Umshini wokuthunga we-Lidl
Imishini yokuthunga i-alpha
Imishini yokuthunga yomfowethu
Imishini yokuthunga abaculi
Imishini yokuthunga yakwaToyota
Imishini Yokuthunga Yasendulo
Imishini yokuthunga ye-Prime Day
imishini yokuthunga yangolwesihlanu emnyama
imishini yokuthunga ngoMsombuluko we-cyber
Imishini yokuthunga 2022 - Inqubomgomo yobumfihlo - Imininingwane mayelana namakhukhi